Reykjavik angamba no toerana mahagaga indrindra eran'izao tontolo izao. Ny renivohitr'i Islandy dia manakaiky ny faritr'i Arktis, ary ny hakanton'ny natiora, izay mifamatotra tanteraka amin'ny fiainan'ny olona iray, dia "manintona" ny faniriana hitsidika ity toerana ity ho an'ny mpizaha tany maro. Eto, na dia misy orinasa goavam-be aza ny orinasam-barotra goavana, ny rivotra dia tena madio ary toa mihodina amin'ny fahatoniana, ny fifandanjana ary ny lanjany.
Alohan'ny hanapahanao hitsidika an'ity tanàna mahagaga ity dia aoka ho azo antoka tsara ny manamarina mialoha ny toerana mety ho an'ny trano fandraisam-bahiny - hotely sy hotely ao Reykjavik. Maro amin'izy ireo no eto, sady lafo sy teti-bola be indrindra.
Ny hotely 5 * no hotely sarobidy sy lafo indrindra. Ny haavon'ny serivisy eto dia ny kalitao avo indrindra. Anisan'ny malaza indrindra amin'izy ireo ianao dia afaka mitanisa ireto manaraka ireto:
Ny Hotely Black Pearl Apartment dia trano fialantsasatra am-pirahalahiana miorina 350 metatra miala ny Old Harbour. Manana toby mamirapiratra sy malalaka izy io, miaraka amin'ny balkon izay afaka mankafy ny fomba fijery mahavariana momba ny tanàna. Ireo efitrano dia manana fantsom-panafody amin'ny marbra. Raha te-hanomana sakafo maraina ao amin'ny efitrano ny vahiny, dia handao izany amin'ny famandrihana.
Tower Suites Reykjavik dia hotely misy toerana tena mahaliana. Izy io dia miorina eo amin'ny faha-21 amin'ny trano fitaratra fitaratra. Ny vahiny dia afaka miditra ao amin'ny efitrano malalaka ao amin'ny penthouse ary mankafy ny fahitana ny toerana misy an'i Reykjavik. Mipetraka eto, ireo mpitsoa-ponenana dia afaka mitsidika ny spa Laugar maimaim-poana. Ny efitrano tsirairay dia manana minibus malalaka.
Hotely 4 kintana
Misy hotely efatra kintana manana serivisy avo lenta no aseho amin'ireo karazan-trano toy izany indrindra amin'ireo hotely malaza indrindra:
Grand Hotel Reykjavik - hotel amin'ny 314 trano amin'ny 14 ety, izay 2 km miala ny foiben'i Reykjavik. Ny manodidina dia ny dobo goavam-be Laugardalslaug, izay mety ho an'ny vahiny izay azony. Ho an'ny mpanao vakansy, misy serivisy maimaim-poana maivana amin'ny fiara fitateram-bidy mankany amin'ny tanàna in-3 isan'andro. Misy trano maro eo an-toerana, ao anatin'izany ny tobim-pahasalamana, spa, sauna ary gym. Mpitsidika maromaro nitsidika an'io, no nanamarika toeram-pisakafoanana iray izay nanomanany sakafo matsiro avy amin'ny isländische Meeres.
Hilton Reykjavik Nordica - dia ao amin'ny distrikan'ny orinasa ao an-tanàna. Afaka mahazo trano maizim-bary sy malalaka misy trano maizim-borona tsara tarehy ny vahiny, izay manome fomba fijery mahavariana momba ny Tendrombohitra Acrefjadl sy Esja na ny Fachsaflowi Bay. Ny sakafo gourmet dia afaka mankafy amin'ny trano fisakafoanana 5 kintana, miaraka amin'ny seafood toy ny crab king, ny lobolan'ny islandey, ny karakôlika arctic ary ny jiron'ny fôsily. Ao anatin'ireo serivisy atolotra eny an-toerana, dia azonao atao ny manamarika ny fahafahana miditra maimaim-poana any amin'ny toeram-pisakafoanana, milomano ao anaty dobo, mitsidika ny dobo mafana amin'ny tany, mandeha any amin'ny sauna na aromatherapy.
Radisson Blu Saga dia hotely 10 minitra miala ny foibe. Ireo efitrano dia maneho fahitana mahatalanjona. Ny endriky ny hotely dia trano fisakafoanana eny ambony tafo. Ao amin'ny efitra sasany dia afaka mijery sarimihetsika malaza ianao. Misy spa eny an-toerana.
Hotel 101 Reykjavik - miorina eo afovoan'ny tanàna akaikin'ny trano fanaovana opera ary trano fandraisam-bahiny maoderina. Ny trano fandraisam-bahiny dia mampiavaka ny fandravahana sy ny trano fandroana, ny efitrano dia voaravaka amin'ny fitambarana tsy mahazatra ny feo mainty sy fotsy. Ny hotely dia manakaiky ny arabe lehibe indrindra ao Laugavegur.
Tranobe kintana telo no manana ny zavatra ilaina rehetra mba hahatonga ny mpitsidika hahatsapa ho mahazo aina. Ny tena malaza amin'izy ireo dia:
Reykjavik Lights dia trano fandraisam-bahiny, ny afovoany dia manavaka ny foto-kevitra tena izy. Rehefa noforonina, ny hevitra fototra dia ny mamerina ny fe-potoam-pahazavan'ny hazavana any Islandy. Ny hotely dia misy làlana 12, izay maneho isa iray volana. Ny trano fandraisam-bahiny dia mifanitsy amin'ny andro tsirairay voafaritra ao amin'ny kalandrie any Islandy fahiny ary voaravaka amin'ny palety iray mampiseho ny loko misy an'i Islandy. Eo amin'ny rindrina dia misy toerana izay mampiseho ny endriky ny natiora, ohatra, ny jiro avaratra na ny masoandro amin'ny misasakalina. Ny trano fisakafoanana dia manasa lovia Islandiana nentim-paharazana
Ny Kianjan'i Hlemmur dia iray amin'ireo hotely tsy mahazatra indrindra any Reykjavik, izay misy toerana ho an'ny mpizaha tany mitady vahaolana amin'ny teti-bola, ary ho an'ireo izay te hijanona ao amin'ny efitrano tsara indrindra. Nanao fanandramana hamoronana hotely mitovy amin'izany i Islanda voalohany. Ny tranobe dia misy dingana 3 natokana ho an'ny trano fandraisam-bahiny, izay misy 300 lays. Ao amin'ny ampahany samihafa dia misy hotely elite mampiadana, izay tsy misy afa-tsy 18 efitra ihany, ahitana ny fepetra mahazatra indrindra amin'ny fiainana.
Orkin dia trano fandraisam-bahiny tsara toerana eny an-dalambe. Tsotra kely fotsiny izany, fa manana efitrano 22 ihany izy, fa tena kanto. Ny efitrano dia roa ka hatramin'ny dimy ambim-bava, misy efitrano fialan-tsasatra amin'ny fialantsasatry ny fianakaviana. Misy kilalao kely kely ho an'ny zanakao, ary olon-dehibe afaka milalao tennis.
Centric Guesthouse - miorina eo afovoan-tanàna, ao amin'ny trano iray manan-tantara ary heverina ho trano fonenana. Ao amin'ny gorodona, dia misy toeram-pisakafoanana kelikely Veidikofinn. Afaka mankafy ny sakafo mahazatra nentim-paharazana any Islandy ianao.
Reykjavik mora indrindra
Ny safidy sarobidy indrindra ho an'ny trano fandraisam-bahiny dia sokajy 1 * sy 2 *. Azonao atao ny mametraka ireto safidy manaraka ireto:
Hotel 4th Floor - efitra na trano tokana na kely dia misy amin'ny isa kely. Misy trano fisakafoanana eo an-toerana.
Guest House Vikingur dia manome safidy 15 trano. Anisan'ireo fanamafisana azonao atao ny manonona fiara maimaim-poana sy toerana fitsangatsanganana.
Reykjavík Hostel Village dia trano fonenam-pianakaviana, 100 metatra miala ny arabe lehibe indrindra ao Leugavegur. Manana efitrano fisakafoanana, izay anaovana buffet isan'andro. Misy toeram-pialan-tsasatra ho an'ny ankizy, ary misy toeram-pisakafoanana eny an-toerana.
Akureyri - toetrandro
Tranoben'ny Railway Ljubljana
Museum of History and Art Jelgava
Palace of Justice (Bruxelles)
Manamarika ny herinandro Shrovetide ho an'ny tovovavy ary tsy vitan'ny hoe!
Vokatry ny voankazo maina - recipe
Tablets avy amin'ny tabataba amin'ny sofina sy ny loha
Wedding akanjo amin'ny sinema
Fampivoarana lalao ho an'ny ankizy 5-7 taona
Chet Trump any Shina: Nanakatona ny vehivavy voalohany tao Shina i Melania nandritra ny lanonana nandritra ny fitsidihany an'i Beijing
Sugar Brew - fomba tsara indrindra hanomanana ny fototry ny alikaola
Mainty manimba ny volo
Takelaka marefo amin'ny lohalika amin'ny fararano 2013
Sakafo an-trano ao amin'ny multifariate
Diloilo volomparasy ao an-trano